Hafaliana ho an'ny vahoaka Malagasy taorian'ny fandresen'i Barea an'i Nigeria - ewa.mg
Foot - News - Sport - Hafaliana ho an’ny vahoaka Malagasy taorian’ny fandresen’i Barea an’i Nigeria
Sary mampiseho ny hafalian'i Malagasy taorian'ny fandresen'i Barea an'i Nigeria.
Sary nindramina avy amin'i Harry Tiana Teddy, Ets Steeve-net sy Orange
Misaotra Barea, Alefa Barea, Miara mirona
Nivoaka tamin'ny : 30/06/2019
Ligue 1 – Voka-dalao 5 Decembre 2018 – Dijon FCO – EA Guingamp ( 2-1 )
Nivoaka ny faran’ny herinandro teo, ny fandaharam-potoana avy eo anivon’ny federasiona malagasy ny taranja atletisma, ho amin’ny taom-pilalaovana 2019. Araka ny tapaka, ny volana desambra izao no hanombohana izany. Hisantarana ny taom-pilalaovana 2019 ny fampivondronana ireo mpilalao voafidy hiatrika ny lalaon’ny Nosy ny ranomasimbe Indiana 2019. Ity fampivondronana ity izay hataon’ny eo anivon’ny FMA ho isan’ny zava-dehibe amin’ity taona ity. Raha ny fantatra, ny 19 sy 20 Jolay izao no hanatontosana ity JIOI 2019 ity any Maurice. Ankoatra izay, fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara miisa 4 no karakarain’ny federasiona. Anisan’izany ny “Cross Country”, hotanterahina any Fianarantsoa ny 16 febroary. Eo ihany koa ny “Trail” amin’ny halavirana 65 kilometatra, hatao ny 5 mey 2019. Toy ny fanao isan-taona, ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, sokajy “jeunes” ny 17 hatramin’ny 19 mey sy ny sokajy “Open” ny 24 hatramin’ny 26 mey, no hamaranana ny fifaninanam-pirenena. Ireo lalao roa ireo izay samy hatao ao amin’ny kianjan’Alarobia avokoa. Hampiavaka ity taom-pilalaovana manaraka ity ny fisokafan’i Madagasikara bebe kokoa amin’ny lalao iraisam-pirenena. Maro tokoa ny fifaninanana any ivelany handraisan’ny atleta malagasy anjara. Anisan’izany, ohatra, ny “African Championships” ho an’ny sokajy 18 sy 20 taona izay hatao ny 13 hatramin’ny 20 Aprily any Abidjan. Manarak’izany ny fiadiana ny tompondakan’Afrika, sokajy “Seniors” ny volana mey 2019. Fa ny tena goavana dia ny “Jeux des îles de l’Océan Indien any Maurice ny 19 hatramin’ny 28 jolay izao ary ny “Word Championships, ny 28 septambra hatramin’ny 6 oktobra 2019. Ireto lalao ireto izay hanomanan-tena fatratra mba hahazoana vokatra tsara. Ho an’ny JIOI manokana, fampivondronana miisa 3 no vinavinaina ho atao amin’ity taona ity, ny volana desambra, ny volana aprily ary ny volana jolay, taona 2019. Hofaranana amin’ny “Marathon International de Madagascar”, ny volana oktobra ny taom-pilalaovana 2019, amin’ny taranja atletisma. Mi.RazL’article Fisokafan’ny taom-pilalaovana atletisma: havondrona ireo hiatrika ny “Jeux des Iles 2019” a été récupéré chez Newsmada.
Torana tsy nahatsiaro tena ny lehilahy iray nitsambikina avy eny ambony tetezana Behoririka ny asabotsy antoandro teo. Hatairana ny an’ny olona nahita azy nilatsaka avy eny ambony tetezana na efa nandrara sy nisintona azy aza ireo olona nahita ny fihetsiny. Tsy fantatra mazava ny antony nahatonga azy nilatsaka teo amin’ny tetezana fa izy tsy nahatsiaro tena no nahataitra ny olona. Nentina hopitaly avy hatrany izy.Hatairana ny ain’olona teny Namontana sy ny manodidina raha nahita fatin-dehilahy iray tao anaty tsinkafona teo amin’ny tetezan’i Namontana, ny asabotsy vao maraina. Manahy ny rehetra sao novonoina tany an-toeran-kafa ity lehilahy ity mialoha ny nanipazana azy tao anaty rano. Naterina eny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly HJRA ny fatiny. L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
67ha: Tovolahy iray tratra teo am-pitsindromana drogue
Miparitaka ny rongony mahery vaika eny 67 ha sy ny manodidina. Tovolahy iray no tratra teo am-pitsindromana izany ka tsy afa-nihetsika intsony…Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria CSP7 67 ha teo am-pitsindromana drogue amin’ny séringue, ny 28 jolay 2021 lasa teo, teny amin’ny faritra 67ha. Toy ny fanaon’izy ireo, ny polisy miasa ao amin’ny CSP7 67 ha dia manohy hatrany ny hetsika manokana efa notanterahiny amin’ny fanaraha-maso ny fari-piadidiany manoloana ireo jiolahy toy ny mpanao sinto-mahery sy fanendahana. Nohamafisina ny fisafoana ataon’ireo polisy manao fanamiana sivily manara-maso any anaty tanàna. Nahitam-bokany izany, ny 28 jolay 2021 tamin’ny 8 ora maraina, tratra teo am-pitsindromana drogue ny tovolahy iray 23 taona tao 67 ha Avaratra Atsinanana. Mbola hita teny an-tanany ny séringue misy zava-mahadomelina. Nilaza izy nandritra ny famotoran’ny polisy fa vidiany 2 500Ar amin’olona mpanatitra eny amin’ny faritra 67 ha Avaratra Atsinanana ny drogue ampiasainy.J.CL’article 67ha: Tovolahy iray tratra teo am-pitsindromana drogue a été récupéré chez Newsmada.